Ikusasa Le-UNWTO Lilolongelwe I-Saudi Arabia ne-Spain: Usuku Olusha Lwezokuvakasha Emhlabeni Wonke E-United Luqale ngo-FII
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba zikaHulumeni » Ikusasa Le-UNWTO Lilolongelwe I-Saudi Arabia ne-Spain: Usuku Olusha Lwezokuvakasha Emhlabeni Wonke E-United Luqale ngo-FII
Izindaba Zezinhlangano • Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba zikaHulumeni • emihlanganweni • Izindaba • I-Saudi Arabia Breaking News • Spain Izindaba Ezintsha • ezithrendayo Manje • Wtn
Ukuvuselela ezokuvakasha kuzothatha isikhathi nemizamo edidiyelwe. Kuzodingeka ukusebenzisana kwamazwe ngamazwe kanye nenhlangano enikezwa amandla ezizwe ngezizwe. Namuhla, iSaudi Arabia neSpain beza etafuleni nesivumelwano esingase silolonge ikusasa lezokuvakasha kanye ne-UNWTO.
ISaudi Arabia neSpain bajoyina amabutho ukuklama kabusha ezokuvakasha ngemuva kwe-COVID kubandakanya ne-UNWTO.
HE Ahmed Al Khateeb – Ungqongqoshe Wezokuvakasha, Umbuso waseSaudi Arabia.
U-HE Maria Reyes Maroto – uNgqongqoshe Wezimboni, Wezohwebo Nezokuvakasha, eMbusweni waseSpain.
The I-Future Investment Initiative (FII) eSaudi Arabia kwenzeke namuhla nabaholi bezezimali abangu-6,000.
I-FII Institute isisekelo somhlaba esingenzi inzuzo esinengalo yokutshala izimali kanye ne-ajenda eyodwa: Impact on Humanity. Izinikele ezimisweni ze-ESG, ikhuthaza izingqondo ezigqama kakhulu futhi iguqule imibono ibe yizixazululo zomhlaba wangempela ezindaweni ezi-5 okugxilwe kuzo: I-AI namarobhothi, Ezemfundo, Ukunakekelwa Kwezempilo, Nokusimama.
Ngokokuqala ngqa, ukuvakasha kanye nezokuvakasha kwaba okunye okwakugxilwe kuzo futhi kwabamba iqhaza elikhulu kule ngqungquthela yomhlaba wonke eyayisingethwe yiSaudi Arabia. Bekukhona abaholi abaphezulu abangu-150 embonini yezokuvakasha nezokuvakasha, okuhlanganisa nongqongqoshe abangaphezu kwe-10.
I-UNWTO ilahlekelwe ukwethembeka nokubaluleka kusukela ngo-2018. Ngenkathi uNobhala-Jikelele we-UNWTO uZurab Pololikashvil ebambe umcimbi wakhe e-Barcelona ngamabomu ngosuku olufanayo kanye nokubamba iqhaza okubuthakathaka, abaholi baseSaudi Arabia bahlangana ndawonye ukuze balolonge ikusasa le-UNWTO.
Umphumela waba isivumelwano I-Saudi Arabia neSpain ukujoyina amandla okuklama kabusha ezokuvakasha ngemuva kwe-COVID kubandakanya ne-UNWTO.
Lesi sivumelwano sisayinwe ngu U-Ahmed Al Khateeb waseSaudi Arabia kanye UMaria Reyes Maroto waseSpain. I-UNWTO inekomkhulu layo eMadrid. Lesi sivumelwano futhi siqeda amahlebezi mayelana neSaudi Arabia ifuna ukuhambisa ikomkhulu le-UNWTO eRiyadh. ISaudi Arabia manje isiyiqembu elilodwa elilungele ukuhola ekulolongeni ikusasa lezokuvakasha emhlabeni kanye nenhlangano ngemuva kwayo - i-UNWTO.
Isitatimende Esihlanganyelwe yiSaudi Arabia neSpain
1. Sibe nomhlangano omuhle kakhulu wokusebenza namuhla emaphethelweni e-Future Investment Intiative e-Riyadh, lapho sihlonze khona inqwaba yemikhakha lapho iSpain neSaudi Arabia zingabamba iqhaza eliphambili ekuvuseleleni umkhakha wezokuvakasha ngemuva kwalolu bhubhane, ukuze libe ngenye yezinsika zokusimama komnotho womhlaba. Umkhakha wezokuvakasha udinga ubuholi obuqinile nokuxhumana ukuze uhlanganise ohulumeni nabalingani bemboni ezimele ukuze basebenzisane kakhulu. Kudingeka sakhe umkhakha wezokuvakasha oqinile, osimeme, nobandakanya wonke umuntu ohlinzeka ngokuchuma isikhathi eside.
2. I-Saudi Arabia ine futhi isaqhubeka nokubamba iqhaza eliphambili ekuhlinzekeni ukusebenzelana kwamazwe ngamazwe kulo mkhakha, kusukela ngokuba ngumongameli wayo we-G20 ngo-2020. UMbuso wakhele phezu kwalokhu ngemizamo eminingana ebalulekile okuhlanganisa noxhaso lwezigidi ezingu-100 zamaRandi eMhlabeni. I-Bank for the Tourism Community Initiative, uhlelo lwe-Best Villages, ngokubambisana ne-UNWTO, futhi manje iSustainable Tourism Global Centre. ISaudi Arabia ibisebenzisana nabalingani bamazwe ngamazwe ukwakha uhlelo oluhlose ukuhlela kabusha ikusasa lezokuvakasha kanye nokubhekana nezinselelo eziwumsuka imboni ebhekene nazo.
3. Ngesikhathi senhlekelele ye-COVID, iSpain ibihamba phambili emizamweni yamazwe ngamazwe yokubuyisela ukuhambahamba njengoba isheshe yamukela Isitifiketi se-EU Digital COVID. ISpain iyizwe lesibili elivakashelwa kakhulu emhlabeni, njengoba ithole izivakashi zamazwe ngamazwe eziyizigidi ezingu-83.7 ngo-2019. Yaziwa ngezindawo zayo nengqalasizinda kanye nezinkampani zayo zezokuvakasha ezisezingeni lomhlaba. ISpain ingumholi wezwe kwezokuvakasha, eyilungu elisungula i-UNWTO, futhi manje isitshala imali esakhiweni esisha esizohlala ikomkhulu lenhlangano.
4. Womabili la mazwe ayavuma ukujulisa ukubambisana kwawo ezindabeni ezintathu ezibalulekile zokuthuthukisa ezokuvakasha: okokuqala, ukukhuthaza ukusimama, okuzobaluleka ukuze kuqinisekiswe ukusebenza kwawo kwesikhathi esizayo njengomkhakha wokukhula kanye negalelo lawo emnothweni womhlaba ongasekho, kanye nokuqinisa ukubandakanywa komphakathi phakathi komsingathi. imiphakathi. Okwesibili, ukubambisana ekuguquleni idijithali, ukwakha izindawo okuyiwa kuzo ezihlakaniphile nezixhumene, nokwenza kahle ukuhamba nokushintshisana kolwazi nemibono ukuze kusheshiswe uguquko lomkhakha wezokuvakasha. Okwesithathu, iSpain kanye neSaudi Arabia zizosebenzisana ukuze kugqugquzelwe futhi kuthuthukiswe ukuqeqeshwa kwezinsiza zabantu ukuze kuqiniswe amakhono abantu abasebenza kulo mkhakha, kusukela ekuqeqesheni umsebenzi wezandla kuya kokuthweswa iziqu kanye nokufunda okukhethekile.
5. Ezokuvakasha ziwumkhakha obalulekile emhlabeni jikelele. Futhi isivumelwano sanamuhla sizoqinisekisa ukuthi abaholi ababili balo mkhakha bazosebenzisana kakhulu ukuze kuzuze bonke abathembele kuso.